ချို ပေါ့ ကျ (၁၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ချို ပေါ့ ကျ (၁၂)
ချို ပေါ့ ကျ (၁၂)
Posted by black chaw on May 11, 2012 in Creative Writing, Entertainment, Myanma News, Opinions & Discussion, Photography, Travel | 56 comments
ကိုသစ်မင်းကတော့ သူ့ရဲ့ ဗီလိန်ပို့စ် (http://myanmargazette.net/77136/creative-writing)
မဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့ကို လောကဓံတွေ၊ကပ်ဆိုးတွေဖန်တီးပေးနေသူတွေရော၊
သူများရဲ့ အားနဲချက်၊အမှားကို ကိုယ်မှာမရှိအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်လား။
ကဲ လောကဇာတ်ခုံလူတို့ဘုံမှာ မင်းသား၊မင်းသမီး မဟုတ်ရင်တောင် “ဗီလိန်” အခန်းကတော့
မ “က” ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပါလား။
အဲ သူများကျတော့ ပြောလို့ရချင်မှရမှာဆိုတော့၊ လုပ်လို့ရတာက ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြင်ဘို့လို့တွေးမိသွားတယ်။
ကိုသစ်ပို့စ်တွေ ပြန်လှန်ရင်း ဗီလိန်ပို့စ် အရောက်မှာ ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတာနဲ့ ဒီစာကိုရေးမိတယ် ဆိုတာလေး
ပွဲကြည့်သူသက်သက် တစ်ယောက်မှ မရှိ
မင်းနဲ့ငါ အကုန်လုံး ဇာတ်ဆောင်တွေချည်းပဲဟေ့
မင်းသားပဲဟေ့ ဖြစ်ချင်တယ် ငါ ဗီလိန်တစ်ယောက်လား မသိတတ်တော့
နောင်တများနဲ့ နောက်ပြန်ပြေးမလား ရဲရဲတင်းတင်း တိုးမလား
စကားလုံး ဝင်းမင်းထွေးရဲ့ ရော့ခ် ကဗျာ အတွဲ – ၂ ၊
ချစ်ကောင်း ရဲ့ ဒုတိယ စီးရီး ခေါင်းစဉ် သီချင်း၊ ဘာအကောင်းဆုံးလဲ သီချင်းထဲက
ကိုထွေးရဲ့ ကဗျာဆန်တဲ့ စကားလုံးအပျင်းစား တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
လောကကြီးမှာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ပွဲကြည့်သူသက်သက် တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။
လူတွေအားလုံးဟာ လောကဇာတ်ခုံကြီးပေါ်မှာ ဇာတ်လိုက်တွေချည့်ပါပဲ။
ကိုယ့် ဇာတ်လမ်းမှာတော့ ကိုယ် က မင်းသားပဲပေါ့…။
သူများတွေအတွက်လည်း ကိုယ်က ဗီလိန်မဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေထိုင်ကြရတာပါပဲ…။
အားလုံးကတော့ ကိုယ့် ဇာတ်လမ်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူများ တွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်းသားပဲ ဖြစ်ချင်ကြမှာပါ…။
အဲဒီလို မင်းသားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်းကနေ ဗီလိန်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တာလည်း ကြုံဘူးကြမှာပါပဲ။
အဲဒါလေးကို ကိုထွေးက ချစ်ကောင်းကြီးဆိုဖို့ ရေးပေးတော့ ချစ်ကောင်းကြီးက
ဘာ… အကောင်းဆုံးလဲ၊ ဘာ… အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုပြီး အကောင်းဆုံးကို အော်ဟစ်မေးမြန်းခဲ့ဘူးပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် ဗီလိန်တွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း မင်းသားနဲ့ ဖိုက်တင်ပလေးတဲ့အခါ
အချိန်တန်ရင် မင်းသားနိုင်သွားမယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ဗီလိန်လုပ်သူကို အားပေးနေမိတာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြည့်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဗီလိန် ဇာတ်ကောင် တစ်ယောက်ကို မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေမိပါတယ်။
အဲဒီလူက ကိုအံ့ကျော် ပါပဲ။
အံ့ကျော် ဘာလဲဆိုတာ ဒီဘက်ခေတ်ကလေးတွေ ကတော့ သိကြမယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဘက်ခေတ် ကိုအံ့ကျော်ကို သီချင်းထဲထည့်ရေးပြီး ဂုဏ်ပြုကြသူတွေထဲမှာ
မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ မှားတဲ့ဘက်မှာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက ထင်ရှားပါတယ်။
ငါ့နံဘေးနားက ချစ်သူလေးကတောင် တဖြည်းဖြည်းငါ့ကို လန့်ကာ
ချစ်သူနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တော့ လူကြမ်းကိုအံ့ကျော်ကို အလွန်နှစ်သက်မှန်းသိသွားတဲ့ ချစ်သူက
သူ့ကို ကြောက်လန့်ပြီး နောက်ရည်းဇားရှာသွားပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလောက် တောင် မှားတဲ့ဘက်က ရှိနေခဲ့တာပါတဲ့…။
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီသီချင်းကို ရေးတဲ့လူက စောဘွဲ့မှူးကြီးပါ။
ဘွဲ့မှူးကြီးကလည်း ရုပ်ရှင်သာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် ဗီလိန် ကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ ဥပဓိပိုင်ရှင်ပါ။
အဆိုးနဲ့ အကောင်းတွဲနေတတ်တာကို မြင်နိုင်ဘို့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့
ဘွဲ့မှူးကြီးရဲ့ ဒသနပါတဲ့ သီချင်းကို မျိုးကျော့မြိုင်က သူ့အတတ်ပညာနဲ့ ထပ်ပြီး အားဖြည့်ပေးတဲ့အချက်ကလေး ရှိပါသေးတယ်။
သီချင်းရဲ့ ဆိုလိုမှာ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဇာတ်လမ်းထဲက ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း အသံကို ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ပြီး ထည့် ထားလိုက်ခြင်းပါပဲ။
ရာမ… လွယ်သလားခက်သလား ရာမ
ဟေ့ဒီမှာ ဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့ ကောင်ဆိုတာ ဟောဒီလိုပစ်နိုင်မှ ဗိုလ်လုပ်လို့ရမယ်ကွ
ဓါးပြဗိုလ်လုပ်ဖို့တောင် သေနတ်ပစ်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ ဒသနလေးကို အားဖြည့်ပေးသွားတာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ မျိုးကျော့မြိုင်သီချင်းတွေထဲမှာ မှားတဲ့ဘက်မှာ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို အမြဲတမ်း နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းအောင်နေနေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ အမှားနည်းအောင်ကြိုးစားကြိုးစား
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်က အမြဲတမ်း မှားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
မှားတဲ့ဘက်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေတတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မှားတဲ့ဘက်မှာ သီချင်းကိုကြိုက်တာ အပြစ်မရှိပါဘူးနော့…။
ဗီလိန်ကို မင်းသားနေရာထားပြီး စာနာနားလည်ပေးတတ်သူတွေထဲမှာ ဆရာ ချစ်ဦးညိုကြီးက နံပတ်တစ်လို့ ဆိုရလောက်အောင် ထင်ရှားပါတယ်။
ရာမဇာတ်တော်ထဲက နံပတ်တစ်ဗီလိန်ကြီး ဒသဂီရိ ကို မင်းသားတင်လို့
လင်္ကာဒီပချစ်သူ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကြီးရေးထည့်လိုက် တာ ဝက်ဝက်ကွဲအောင် အောင်မြင်ခဲ့ပါရောလား ကျောင်းဒကာရယ်…။
အဲဒီအကြောင်းအရာကိုပဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး အကော်ဒီယံ အုန်းကျော် က လွှမ်းမိုးအတွက် အချစ်ရှုံးသမား ဒသ ဂီရိ ဆိုတဲ့ သီချင်း ရေးလိုက်ပြန်တော့လည်း ပေါက်သီချင်းဖြစ်ခဲ့သေးပါတယ်ဗျာ။
ဗီလိန်တစ်ယောက်ကို ကိုယ်ချင်းစာပေးတတ်သူတွေ ရဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုတွေက မနည်းလှပါဘူးဗျာ။
အထက်မှာပါခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ နာမည်ကျော် ဗီလိန်ကြီး အံ့ကျော် ဟာ
ဒါရိုက်တာ ဆရာကြီး ဦးသုခရဲ့ ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင် ဇာတ်ကားမှာ
သနားစရာ ဇာတ်ရုပ်က ဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး အကယ်ဒမီ ဆု ဆွတ်ခူးသွားပြန်တော့ တချို့တွေက မုဒိတာမပွားနိုင်ကြပဲ ကဲ့ရဲ့စကား ဆိုကြပြန်ပါသတဲ့။
အဲဒီအကြောင်းအရာလေးကို စိုင်းခမ်းလိတ်ကြီး ရေးပြီး ဗိုလ်ထီး ဆိုခဲ့တဲ့ လူကြမ်းမင်းသား ဆိုတဲ့ သီချင်းမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီအကယ်ဒမီဟာ ဒီတစ်ကားလုံးမှ တစ်ယောက်သာတန်တယ်ဆို
ဟိုဖြူဖြူ ပိန်ပိန် ရုပ်သနားကမားနဲ့ တစ်ယောက်ပို ရကောင်းသတဲ့
ဗီလိန်လုပ်ပြီး ပရိသတ်မေတ္တာကို ယူဖို့ ကြိုးစားသူတွေထဲမှာ ကျော်ဟိန်းကြီးလည်းပါပါတယ်။
ရမ္မက်ဇော ဆိုတဲ့ကားမှာ ကိုစောဦးဆိုတဲ့ ဗီလိန်၊
(ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ခင်သန်းနုကြီးရဲ့ သမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ စမ်းပပအောင်လေးကို ခြေတော်တင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အထိ ကြမ်းပြ ရမ်းပြခဲ့တာပါ)။
အော် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကို မှတ်မိနေတော့တာပါပဲ…။ ခက်လိုက်တာ…။
အကြွေးဇာတ်ကားမှာ ဘဒင် ဆိုတဲ့ ဗီလိန်
(ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကျော်သူ့ရည်းဇားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇင်မာဦးလေးကို အတင်းအဓမ္မကြီးကို သိမ်းပိုက်ပြခဲ့တာပါ)။
အော် ခြေတော်မတင်ခင် ဇင်မာဦးက ဓါးမနဲ့ ပုခုံးကို ခုတ်လိုက်တာတောင် မှတ်မိနေသေး။ ဟေးဟေး။ မှတ်ဉာဏ်တွေက တကယ်ကောင်း။
ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယာဉ်မှူး ဇာတ်ကားမှာ တာတီးဆိုတဲ့ စာမတတ်ပေမတတ် ဗီလိန်၊
(ဒီကားထဲတော့ သိ င်္ဂီထွန်းလေးကို ဘာမှကို မဘာခဲ့ပါဘူး။)
စသည်ဖြင့် ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်မေတ္တာကို ရအောင်ယူပြခဲ့ဘူးပါတယ်။
လူတွေအားလုံးကတော့ ဗီလိန် ဘယ်ဖြစ်ချင်ကြပါ့မလဲ။
ကျွန်တော်လည်း လူတစ်ယောက်မို့ တခြားလူတွေအတွက် (ကိုသစ်ပြောသလို) ဗီလိန်တစ်ယောက်မဖြစ်ချင်ပါဘူး။
သို့သော်လည်း ဗီလိန်ဖြစ်လိုက် မင်းသားဖြစ်လိုက်နဲ့ လုံးချာလည် လိုက်နေရတာပါပဲ ခင်ဗျာ။
မှန်တဲ့အခါ မင်းသား၊ မှားတဲ့ အခါ ဗီလိန် ဆိုတာမျိုးလေးလောက်တော့ ဖြစ်ခွင့်လေး ရချင်ကြတာပါပဲ။
မြန်မာရုပ်ရှင်ထဲက ဗီလိန်မင်းသားတွေလို မှားလည်း ဗီလိန် မှန်လည်း ဗီလိန် ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကြီးကို စိတ်ကုန်မိတာ အမှန်ပါ။
ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် မှားတဲ့ဘက်မှာ နေရတဲ့ဘဝကြီးကိုလည်း စိတ်နာမိတာ အမှန်ပါ။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ …။
Customer is always right. ဆိုတဲ့ ဝယ်သူ အမြဲမှန်သည် ဆိုတဲ့ စာသားကို တစ်လွဲသုံးနေကြသူတွေ ရှိနေပါပြီ။
ဘလက်ချော အမြဲမှန်သည် တို့။
နိုဇိုးမိ အမြဲမှန်သည် တို့။
ဗိုက်ကလေး အမြဲမှန်သည် တို့ လိုပေါ့ဗျာ။
ကိုယ်က မင်းသားလား ဗီလိန်လား ဆိုတာ သမိုင်းက ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ဟာကို ဆုံးဖြတ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ သတိလေး ကပ်စေချင်တာပါ။
ဘလက်ချောတစ်ယောက် မှားလည်း ဗီလိန်၊ မှန်လည်း ဗီလိန် ဘဝကြီးကို ညည်းငွေ့နေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ရေးချင်တာနဲ့
လှည့်ပတ်ရေးနေလိုက်တာ လိုရင်းမရောက်ဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ…။
ဒီနေ့အထိ ခေတ်မီနေဆဲ ဆရာဇော်ဂျီ ကဗျာ
ဒီတစ်ပတ်တော့ စာဖတ်ချိန်နည်းတာကြောင့် ကဗျာကောင်းကောင်း ရှာမတွေ့လို့
ဟိုးတုန်းက ရေးခဲ့ပြီး အခုအချိန်အထိ လာအံဝင်နေတဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို အမှတ်တရ
တောပင်ကို တော်တော် ခုတ်ပါ့
ဒီကဗျာလေးဖတ်ပြီး ရှိသမျှ သစ် ကိုယ့်အမေလင် ပေးတဲ့အမွေလို ခုတ်ရောင်းနေကြသူများ
ဆရာမကြီး TTNU အတွက် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်
ကျောင်းဆရာဆိုတာ အမြဲခေတ်မီ နိုင်ငံရေးသမားပါ (ဒေါက်တာမောင်သင်း)
ဆရာဒေါက်တာမောင်သင်း (မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်)ရေးတဲ့
ဂျာနယ်ဆောင်းပါးတွေ စုစည်းထားတဲ့ စာအုပ်လေး ထွက်လာပါတယ်။ ပညာရေးလောကကဆိုတော့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေပါ။ အဲဒီစာအုပ်လေးထဲက ကျောင်းဆရာဆိုတာ အမြဲခေတ်မီ နိုင်ငံရေးသမားပါ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေး
ဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာမကြီး TTNU ကို ရိုးသားစွာ သတိရလိုက်မိပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကလည်း ကျောင်းဆရာမလုပ်ခဲ့ပြီး
အခုထိလည်း လူငယ်တွေကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပေးနေဆဲရှိနေတဲ့ ဆရာမကြီး ကို ဒီဆောင်းပါးပါ စာစုလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ချင်တာပါ။
နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးဖို့ ပြည်သူတိုးတက်ဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင် လူတွေကို ပညာပြည့်ဝအောင် အရင်လုပ်ရတယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက်မှုဆိုတာ လူတွေရဲ့အရည်အသွေးတက်လာမှ ဖြစ်မှာ၊ အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ လူတွေနဲ့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးဖို့ တိုးတက်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ မင်းကြည့်လေ တို့ဆီကို စစ်အတွင်းကလာတဲ့ ဂျပန်တွေကို ဗမာတွေက ငပုတဲ့။ အရိုင်းအစိုင်းတဲ့။ အခု တခြားစီပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုတာ ကျွန်းပင်လည်းမပေါက်၊ ရေနံလည်းမရှိ၊ ကျောက်သံပတ္တမြားနတ္တိ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံပါ။ အဲဒီငပုတွေ တိုးတက်နေလိုက်ကြတာ ကမ္ဘာ့ထိပ်ရောက်နေပြီး ဘာလို့လဲဆိုတော့ သဘာဝအရင်းအမြစ်ဆင်းရဲပေမယ့် ပညာတတ်တဲ့သူတွေ ပေါကြွယ်ဝလို့ကွ၊ လူတွေပညာတတ်လာရင် တိုးတက်အောင် လုပ်တတ်တာပဲ
(ကျွန်တော်တို့ စကားပြောနေတဲ့အချိန်က ၁၉၇၈-ခုနှစ်၊ ဆရာကြီး ဒေါက်တာကျော်စိုး ဂျပန်မှာ ဧည့်ပါမောက္ခ (၁) နှစ်လုပ်ပြီး ပြန်လာခါစပါ)
မင်းက ထင်လိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပါတီတွေဝင်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင်လုပ်တာမှ နိုင်ငံရေးလို့ ထင်လား။ မင်းတို့ပြောပြောနေတဲ့ ပြည်သူကောင်းစားဖို့ ပြည်သူတိုးတက်ဖို့ ဆိုတော့ ပြည်သူတွေကို အသိဉာဏ်မြင့်အောင် ပညာတတ်အောင်လုပ်တာလည်း (အဲဒီတုန်းက လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဆိုတဲ့စကား မသုံးကြသေးပါ) နိုင်ငံရေးပါပဲကွာ။ ဒါကြောင့် လူသားမျိုးဆက်တိုင်းကို အသိဉာဏ်မြှင့်ပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာအလုပ်ဟာ လည်း နိုင်ငံရေးအလုပ်ပါပဲ။ ပါတီတွေ ဘယ်လောက်ပျက်ပျက်၊ ဝါဒတွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ဆရာအလုပ်၊ အာစရိယဝါဒနဲ့ မျိုးဆက်တိုင်းကို အသိဉာဏ်မြှင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်ဟာ မဖဲ့မစောင်း ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို စိတ်ကောင်းယှဉ် ရှေးရှုနှင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါ။
အဲဒီတော့ ဘာနိုင်ငံရေးပဲလုပ်လုပ် ပြည်သူတွေကို အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးအောင် အရင်လုပ်ရမယ်၊ အဲဒီလို ပညာမျက်စိပွင့်၊ ပညာနားပွင့်အောင် တိုးတက်အောင်လုပ်မယ့်သူတွေကတော့ ကျောင်းဆရာတွေပဲ။ ကျောင်းဆရာတွေဟာ ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါမှ မတိမ်ကောတဲ့ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေပါ။ အမြဲခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံရေးကို လုပ်နေသူတွေပါ။
ကဲ ဒီဆောင်းပါးက ကျောင်းဆရာတွေဟာ အမြဲခေတ်မီနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြသွားတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာမကြီး TTNU ဟာလည်း အမြဲခေတ်မီနေတဲ့ နိုင်ငံရေးကို အခုအချိန်အထိလုပ်နေတယ်
ဆိုတာလေးကို ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေက အသိအမှတ်ပြုကြရအောင်ပါ။
အိမ်မှာလည်း လူငယ်တွေကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးနေတယ်၊ ရွာထဲမှာလည်း ပို့စ်လေးတွေနဲ့ ပညာ ဝေမျှပေးနေတယ်။
ဒါ ဆရာမကြီး TTNU လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါ။
ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်လေး ဆရာမကြီးဖတ်စေချင်လို့ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဝယ်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာလည်း အခုထက်ပိုတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး
ကျွန်တော်တို့ တိုးတက်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်ပါစေလို့…။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ သန့်စင်ရေးလုပ်ပြီ (သံတော်ဆင့်)
သတင်းခေါင်းစဉ်ကြီးကလည်း ကြောက်စရာကြီး။ သန့်စင်ရေးလုပ်ပြီတဲ့။ ဖတ်သာကြည့်တော့ဗျာ။
ဗဟိုက လူကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီး စနစ်တကျ စီစဉ်တာပဲ။ ပါတီအောက်ခြေကစပြီး အကျင့်ပျက်ချစားနေတဲ့ ကော်မတီတွေ၊ ပြည်သူက လက်မခံတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ နေရာမှာ ပြည်သူတွေအတွက် ပါတီအတွက် တစ်ကယ်အလုပ်လုပ်မယ့် သူကို ရွေးချယ်ဖို့
ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတဲ့ အဆင့်ဆင့်အတွင်းရေးမှူးတွေက နေမြဲအတိုင်းလို့ သိထားရတော့ အောက်ခြေမှာ
ခံစားနေရတဲ့ အမှုဆောင်တွေအနေနဲ့ အခြေအနေအမှန်ကို လူကြီးတွေ သိစေချင်တယ်။ ဒီလူတွေထဲမှာ လူကြီးတွေ အရှိန်အဝါသုံးပြီး
ကိုယ်ကျိုးအတွက် အမြတ်ထုတ်သွားတဲ့အခါ ဒိလူတွေကြောင့် ပါတီနာမည်ပျက်ခဲ့ရတယ်။
ပါတီအပေါ် ယုံကြည်ချက် ခံယူချက် အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေကတော့
ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီ အမှန်တကယ် ရပါစေလို့ သာ ဆုတောင်းနေရတယ်
လို့ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သံတော်ဆင့်ကို ပြောကြားပါတယ်တဲ့ဗျာ။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအတွင်း ပြန်လည်ရွေးကောက်ပွဲများကို ဇွန်လအတွင်း တိုင်းခရိုင်အဆင့်အထိ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံများက ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ရပ်/ကျေး အဆင့်ကို မြို့နယ်၊ မြို့နယ်အဆင့်ကို ခရိုင်၊ ခရိုင်အဆင့်ကို တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၊ တိုင်းနဲပြည်နယ် ကော်မတီများကို ဗဟိုမှ အဆင့်ဆင့်ကြီးကြပ်၍ ပြန်လည် ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးက သံတော်ဆင့်သို့ ပြောပါတယ်တဲ့ ဗျာ။
ကိုယ်ကျိုးအတွက် အမြတ်ထုတ်သွားတဲ့အခါ ဒိလူတွေကြောင့် ပါတီနာမည်ပျက်ခဲ့ရတယ်
ဆိုတာလေးကို သက်သေ နဲ့တကွ တင်ပြပေးနိုင်ရင် ပါတီ ဂုဏ်သိက္ခာ ပြန်တက်ကောင်းတက်နိုင်ပါတယ်။
ကြပ်ပေးတာ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ ပါတီ ဂုဏ်သိက္ခာတက်စေဖို့ အကြံကောင်းလေးပေးကြည့်တာပါ။
လုပ်ကြဗျာ။ NLD ရော ပြည်ခိုင်ဖြိုးရော အားကောင်းမှ တိုင်းပြည် မြန်မြန်တိုးတက်မှာ။
လက်ခုတ်တီးပြီး အားပေးပါတယ် နော့…။
စကားတစ်ခွန်းအတွက် တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့ လယ်/ဆည် ဝန်ကြီး (ပြည်သူ့ခေတ်)
ယူတတ်ရင် ယူလို့ရတဲ့ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းပြောပြချင်သေးတယ် ကျောင်းဒကာ။
တာဝန်ကြီးကြီး ယူထားပြီး စကားကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ ပြောမိတဲ့ ဒဏ်ကို ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦး
လွှတ်တော်ထဲမှာ တောင်းပန်လိုက်ရတဲ့ သတင်းလေးပါ။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး ရောက်လာတဲ့ လူက စာမှမတတ်။ ၁ဝ တန်းမအောင်ဘဲ လွှတ်တော်ထဲလာထိုင်တော့
သူများထဆို မတ်တပ်ထနေတယ်။ သူများထိုင်ဆို ထိုင်နေတယ်။ သူမှ ဘာမှ မသိတာ။ ဘာတွေပြောနေလဲ သူနားလည်တာ မဟုတ်ဘူး။
အထက်ပါ စကားတွေကတော့ လယ်/ဆည် ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် ရဲ့ Hot News ဂျာနယ်နဲ့
အင်တာဗျူး မှာ ပြောကြားသွားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ စကားကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက အကြီးအကျယ် မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး
ဝန်ကြီးအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့ တကွ လွှတ်တော်အားလုံး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကို
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ တရားဝင် ဝန်ခံခြင်း၊ ဝန်ချ တောင်းပန်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပေးပါရန် နှင့် တောင်းပန်ခြင်း
မပြုပါက ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား လေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘဲ ဖေါက်ဖျက်ခြင်း စော်ကားကျူးလွန်မှုများကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
လွှတ်တော်အမတ် ၂၀ဝကျော် က လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီး တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကက လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ပူးပေါင်းကော်မတီကို
ဧပြီလ ၂ရ မှာ ဝန်ကြီးကို ဆင့်ခေါ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးနောက် ကော်မတီမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်
အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစီရင်ခံစာမှာ
အချို့ အချက်အလက်များမှာ လွှတ်တော်တစ်ရပ်လုံးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို ပြည်သူလူထုမှ အထင်အမြင်လွဲမှားစေရန်၊ အယုံအကြည်ကင်းမဲ့စေရန်၊ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေနိုင်ကြောင်း ဖေါ်ပြပြီး သဘောထားနှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြတောင်းပန်စေသင့်ကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဦးမြင့်လှိုင်က ကော်မတီကို ရှင်းပြရာမှာတော့
“ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မပါပေမယ့်လို့ ပြောတဲ့နေရာမှာကတော့
ဒီလိုများဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ ဥပမာလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်က မိသားစုဆန်ဆန် အသွင်သဏ္ဍာန်ယူပြီးတော့ ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”
လို့ ပြောခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ကော်မတီက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအနေနဲ့ တောင်းပန်နိုင်မလားလို့ မေးမြန်းရာမှာတော့
“ကျွန်တော့်အတွက် အလုပ်ရှုပ်ကြရတာမို့ ကျွန်တော် တောင်းပန်ရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်” ဟု လည်းကောင်း၊
“သူတို့က မဟုတ်ဘူး ဝန်ကြီးရယ်၊ ခင်ဗျားထိုင်ကန်တော့မှပဲ ကျေနပ်မယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်က နိုင်ငံတော်နဲ့ အစိုးရအတွက် ကျွန်တော့်သိက္ခာကို မငဲ့ပါဘူး၊
ကျွန်တော် ထိုင်ကန်တော့ဆို ကန်တော့မှာပါ၊ ကန်တော့ဖို့ အဆင်သင့်ပါ။
ကျွန်တော် တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး။ အထင်အမြင်လွဲမှုပေါ့နော်”
ဟုလည်းကောင်း ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။
ဆိုတဲ့ ချစ်ကောင်းကြီးရဲ့ မာယာ သီချင်း လေးတောင် သတိရမိပါတယ်ဗျာ။
ထိုင်ကန်တော့မှ ကျေနပ်မယ် ဆိုရင် ထိုင်ကန်တော့ပါမယ်တဲ့။
အော် စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အောက်ကျနောက်ကျခံပြောနေရရှာတဲ့ ဝန်ကြီးရဲ့ အဖြစ်ကို ကြည့်ရတာ ဇာတ်နာအောင် ဇွတ်အတင်းဖန်တီးထားတဲ့ မြန်မာကားတစ်ကားကြည့်ရသလို ခံစားရပါတယ်ဗျာ။
၁ဝ တန်းမှမအောင်ဘဲနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လာလုပ်နေကြတယ် ဆိုသူတွေက
ဝန်ကြီးကို ကန်တော့ပြီး တောင်းပန်ဖို့ မတောင်းဆိုလို့ ဝန်ကြီးခင်ဗျာ မကန်တော့ခဲ့ရပါဘူးတဲ့ဗျာ။
နို့မို့ ဝါမဝင်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်သတင်းကျွတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ကြည့်နေရဦးမှာဗျ။ ဟေးဟေး…။
HOT NEWS ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် မမ ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (Hot News)
လယ်/ဆည် ဝန်ကြီးရဲ့ လွှတ်တော်ကော်မတီကို ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
Hot News ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် မမ က ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
ကြေညာချက်က ရှည်လွန်းလို့ အသေးစိတ်မဖေါ်ပြတော့ပါဘူးဗျာ။
အနှစ်ကျတဲ့ စာသားလေးတစ်ခုပဲ ခေါင်းစားခံပြီးရွေးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိ၏မှားယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်ကို မိမိတာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည့်အစား
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွှဲချဖြေရှင်း အလွတ်ရှောင်ခြင်းသည် သာမာန်ပြည်သူအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပါက
ပြသနာမရှိပါ။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဆင့်ကို တာဝန်ယူသူတစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဝန်ကြီးဦးမြင့်လှိုင်အနေဖြင့်
စကားတစ်ခွန်းအပေါ် ဖြေရှင်းမှုမှာ ဝါးလုံးရှည်ဖြင့် သိမ်းရမ်းသကဲ့သို့ လွှဲချ ပြုမူခြင်းမှာ မဖြစ်သင့်ပါ။
ပြောမိလျှင်တောင်းပန်ရန်နှင့် မပြောမိဘဲ ဂျာနယ်မှရေးသားဖေါ်ပြပါက Hot News ဂျာနယ်နှင့် မမကို ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲရန်သာရှိပါသည်။
Hot News ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ်ကလည်း ခပ်မိုက်မိုက်ပါပဲ။
မပြောမိဘဲ ဂျာနယ်မှ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့တယ်ဆိုရင် တရားစွဲလိုက်ပါလို့ကို စိန်ခေါ်လိုက်တာပါ။
လေးဖြူကြီးပြောသလို မိုက်တယ်ဗျာ လို့သာ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိဘဲ လက်တမ်းဖြေဆိုနေကြတာဟာ တာဝန်ကြီးကြီးယူထားသူတွေအနေနဲ့ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ စွန့်စားမှုတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး…။
ခပ်တည်တည်နဲ့ ဆရာကြီးစတိုင်ဖမ်းလို့ အသားလွတ်ကြီး ဝင်ရမ်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အာဟိ…။
ငယ်ဖြူ မဟုတ်တဲ့ ကျော်သူ (Sunday)
ဒီသတင်းကတော့ နိုဇိုးမိကြီးတို့ ပေါက်ဖေါ်တို့လို ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီး ဇွတ်မိုက်နေကြသူတွေ အားတက်စေမယ့် သတင်းမျိုးဗျ။
နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ကျော်သူ ဟာ ငယ်ဖြူသန့်သန့်လေးတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ဦးလေးရေ။
မဟုတ်တမ်းတရားတွေ လျှောက်ပြောတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ဗျာ။
ကျော်သူကြီးကိုယ်တိုင် ပြောသွားတဲ့ စကားလေး ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဦးဇော်လင်း၊ ဦးကျော်ဟိန်း၊ ဦးညွန့်ဝင်း၊ ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းတို့ကို အရမ်းကြိုက်ပြီး အားကျခဲ့တယ်။
မင်းသားဘဝမှာ သီလမလုံခဲ့ဘူး။ အရက်သေစာ၊ မိန်းမကိစ္စ စသည်ဖြင့် မကင်းခဲ့ဘူး။
အခုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ငါးပါးသီလ လုံအောင်ထိန်းပြီး လူပီသအောင်နေတယ်။
အရင်မင်းသားဘဝမှာ သီလမလုံတော့ လူမပီသခဲ့ဘူး။
ဘဘ ဦးသုခရဲ့ ကျေးဇူးတွေကြောင့် ၂၀၀ရ လောက်မှ လူဖြစ်သွားတယ်လို့ ခံယူတယ်။
ကျော်သူကြီးရဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောသွားတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်လေးအတွက် လက်ခုတ်တီးပေးပါတယ်ဗျာ။
တချို့များ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့ (ဟုတ်တာတွေချည်းပဲ အကုန်လျှောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့)
ငယ်ဖြူကြီးတွေလို ဟန်လုပ်နေကြတာတွေ တွေ့နေရတော့ ကျော်သူလို ပွင့်လင်းမှု မျိုးကို ကြိုဆိုကြရမယ် မဟုတ်လား ကျောင်းဒကာရယ်…နော်။
အင်း… အမေရိကားရောက်နေတဲ့ ကျော်သူ ကြီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သူကြီး kai ကို အထူးစကားနပမ်းပွဲ ဆိုပြီး ရုံသွင်းပြလိုက်လို့ကတော့ အမြတ်အစွန်းကြီးကြီးရမှာ မြင်ယောင်သေးဟေးဟေး။
အော် ၂၀၀ရ လောက်မှ လူဖြစ်သွားတယ်လို့ ခံယူတယ်ဆိုတဲ့ ကျော်သူကြီးရဲ့ ဒိုင်ယာလောခ်ကို
သူကြီး ဘယ်လို ဒိုင်ယာလော့ခ် နဲ့ ပြန်ချေပမလည်း ဆိုတာ ကြည့်ချင်သေးတာဗျ။
ကျော်သူကြီး ပြောသွားတာ ဖတ်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရော သောက်ဖေါ်သောက်ဘက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုကြီးမိုက်တို့ အမတ်မင်းတို့ ဖက်တီးကက်တို့ ပေါက်ဖေါ်လေးတို့ကို ပြန်အားပေးရဦးမယ်။
ရွှေတိုက်တို့ သူရဇော်တို့ M လုလင်လေးတို့ ကျတော့ ခွက်ပုန်းသမားတွေဆိုတော့ ထည့်မရေးလိုက်တော့ပါဘူးဗျာ။
သူတို့ သိက္ခာလည်း ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်နော့…။
အခုသောက်နေပေမယ့် တချိန်ကျရင် ကျော်သူလို ငါးပါးသီလ လုံအောင်၊ ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါမည်ပေါ့။
၂၀၂၂ ခုလောက်ဆိုရင်တော့ ပြတ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။ အော် တော်တော် နီးနေပြီဗျ။ အာဟိ။
နိုဇိုးမိကြီးကိုလည်း အားပေးရဦးမယ်။ (ဂီဂီလည်း ပါပေမယ့် ထည့်မရေးပါနဲ့ ဆိုလို့ မရေးတော့ပါဘူးဗျာ…)
အခုအချိန်မှာ မိန်းမကိစ္စ မကင်းသေးပေမယ့် တချိန်ကျရင် ကျော်သူကြီးလို ငါးပါးသီလ လုံအောင်ထိန်းဖို့ ကြိုးစားပါပေါ့။
၂၀၂၂ လောက်ဆိုရင်တော့ ကိုနိုကြီး မိန်းမကိစ္စ ကင်းနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။
သူကတော့ ပြောရှာပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘယ်သူ့ကိုမှ မစခဲ့ပါဘူးဗျာ တဲ့။
သူတို့ကသာ ကျွန်တော့်ကို စခဲ့ကြတာပါတဲ့။
နိုဇိုးမိဆိုတဲ့ ယုန်ကြီးက မိန်းမဆိုတဲ့ ပိုက်ကွန်ကြီးကို တစ်ခါမှ မတိုးခဲ့ပါဘူးတဲ့။
မိန်းမဆိုတဲ့ ပိုက်ကွန်ကြီးတွေကသာ နိုဇိုးမိ ဆိုတဲ့ ယုန်ကြီးကို တိုးခဲ့တာပါတဲ့။
ကျွန်တော်က သူ့ကို မေးပါတယ်။ ရှောင်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ဘူးလား လို့။
ဟင့်အင်း…ရှောင်ရမှာ အားနာလို့တဲ့။ ကောင်းရော…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေ ကျော်သူကြီးလို အရက်တွေ မိန်းမကိစ္စတွေ ကို စွန့်လွှတ်ပြီး
(ခေါင်းခါခါ လည်ခါခါ တွေ မလုပ်ကြနဲ့လေဗျာ။ ကျွန်တော် ဆိုလိုတာက ၂၀၂၂ ခုနှစ်လောက်ကို TARGET ထားတာပါ။
ငါးပါးသီလ လုံအောင် ထိန်းကြပါလို့ အရက်သမားအခြင်းခြင်း တစ်ခွက်ပိုသောက် လိုက်ရပါ သည် တမုံ့တကားတည်း။
ကိုယ့်ကို အရမ်းချစ်ပြီး အရမ်းတန်ဘိုးထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ပေါ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းနေတဲ့ ဆုပန်ထွာ (Sunday)
သီးချိန်တန်သီး ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုတဲ့ စကား ဘယ်သွားထားမလဲ ကျောင်းဒကာရယ်။
အခု သီးချိန်တန်လို့ မသီး ပွင့်ချိန်တန်လို့ မပွင့်ရရှာတဲ့ အပျိုကြီး ဆုပန်ထွာ ရဲ့ ဆုတောင်းလေးဖတ်ပြီး
ကိုဂျေကြီး ရေးပြီး ခိုင်ထူးဆိုခဲ့တဲ့ ဆိုင်သူကိုယ်စီနဲ့မို့ သီချင်းလေးတောင် ပါးစပ်က ညည်းမိသွားပါတယ်။ တကယ်ပါ။
ဒို့နှစ်ယောက် ခုထက်ပို စောတွေ့ကြရင် ပျော်ကြရမှာ
မင်းရောငါရော ဆိုင်သူကိုယ်စီ ရှိပြီးသားဘဝမှာ
ဒို့နှစ်ယောက် ပျော်သင့်သလား ဒို့နှစ်ယောက် ပျော်ရဲသလား
ဘာဖြစ်လို့ ဒီသီချင်း ညည်းမိသလဲ ဆိုတာ ဆုပန်ထွာ ဆုတောင်းလေး သာ ဖတ်ကြည့်ပေတော့ ဗျို့။
ပန့်ကို အရမ်းချစ်ပြီး အရမ်းတန်ဘိုးထားနိုင်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ပေါ်လာပါစေလို့
ပန်ပန် ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းပါတယ်။ ပန်ပန်က ရွေးလွန်းအားကြီးလို့ ခုလို အပျိုကြီးဖြစ်နေတာ ထင်ပါတယ်။
ကဲ သိပြီလား။ ခုထက်ပိုပြီး ၁၅ နှစ်လောက်သာ ကျွန်တော်နဲ့ ဆုပန်ထွာလေးနဲ့ စောတွေ့ခဲ့ကြရင်
ဒီလို ဆုတွေ တောင်းနေစရာ မလိုတော့ဘူး။
အခုတော့ ခင်ဗျာလေး မှာ ဆုတွေဘာတွေတောင် တောင်းနေရဆိုတော့ စိတ်ထဲ ထိခယက်မိပါ တယ် ဗျာ။
မဒမ်ဘလက် လာပြီဗျို့… ။
ဂီဂီရေ နင့်မြင်း ခဏငှားဟေ့… လစ်ပြီ…။
NLD ပါတီဝင် လင်းလင်းရဲ့ နိုင်ငံခြားခရီး ( Sunday )
NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဦးဇေယျာသော်၊ ဒေါ်စန္ဒာမင်း၊ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တို့ အုပ်စုနဲ့အတူ
အဆိုတော်လင်းလင်းလည်း ဩစတြေးလျ နိုင်ငံ ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပတဲ့
နိုင်ငံရေးနှင့် မူဝါဒရေးရာဆိုင်ရာ အကြံပေးသင်တန်းကို တက်ရောက်ဖို့ ထွက်ခွာသွားပါတယ်တဲ့။
သင်တန်းက ရက်တိုသင်တန်းဖြစ်ပြီး မေလ ၉ ရက်နေ့မှာ ပြန်ရောက်လာပါမယ်တဲ့။
ကြည့်ရတာ လင်းလင်း လည်း နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်တော့မယ့်ပုံပဲဗျ။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကျရင် NLD အမတ်လောင်းစာရင်းမှာ လင်းလင်း လည်း ပါလာမယ့် သဘောရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။
ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို ဖြတ်သန်းပြီး ရဲရဲသာဆက်လျှောက်ဖို့ လက်ခုတ်တီးပြီး အားပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း (Sunday)
ဥက္ကဌကြီး ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့ ခေါ်ယူသတိပေးဆုံးမမှုကို ခံယူရမယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်လေးနဲ့
Sunday ဂျာနယ်တို့ အင်တာဗျူးလုပ်ထားတာလေးတွေထဲက ဖတ်ချင်စရာလေးတွေ ရွေးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အခုလို အများကြားထဲမှာ ဟိုက်လိုက်လုပ်ပြီး သတိပေးဆုံးမခံရတယ်ဆိုတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်လေးခင်ဗျာ စိတ်ထိခိုက်ရှာမှာပါပဲ..။
ဖြေရှင်းစရာ ပြောစရာတွေလည်း ရှိနေမှာပါပဲ..။ အဲဒီတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်လေး ရဲ့ ဖြေရှင်းစကားလေးတွေကိုလည်း
ကျွန်တော်တို့ နားထောင်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်…။
Sunday – ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေအပေါ် သင်ဇာ့အနေနဲ့ အရင်ဆုံးပြောချင်တာက…။
ဖြေ – ပြည်သူချစ်တဲ့ အနုပညာရှင် Celeberity တွေဆိုတာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်ဆိုတာ နည်းပါတယ်။ အချိန်နည်းတဲ့အတွက် စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါ အပန်းဖြေဖို့ နည်းလမ်းကလည်းနည်းတော့ သင်္ကြန်ကာလမှာ လူငယ်သဘာဝ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ပျော်မိတာပါ။ အဝတ်အစားတွေကလည်း ခေတ်နဲ့အညီ ဝတ်ထားတာပါ။ သူ့နေရာသူ လိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးကို ဝတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်း သင်ဇာ့မှာရှိပါတယ်။ ဒီအဝတ်အစားတွေက သင်္ကြန်ကာလနဲ့လည်း လိုက်ဖက်မယ်ထင်လို့ ဝတ်ဖြစ်တာ။ တခြားလူငယ်တွေလည်း သင်ဇာ့လို ပုံစံမျိုးတွေ အများကြီးဝတ်တယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဇာ တစ်ယောက်တည်းချွန်ထွက်နေပြီး ဝတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူများတကာတွေ ဝတ်တာ လှလို့ သင်ဇာလည်း အားကျပြီး ဝတ်ဖြစ်တာပါ။
ဒါက ဝေဖန်မှုတွေကို သင်ဇာဝင့်ကျော် အနေနဲ့ ဖြေရှင်းတဲ့ သဘောလေးပေါ့ဗျာ။ နားလည်ပေးတာ မပေးတာကတော့
ခင်ဗျားတို့ အပိုင်းပဲ ကျောင်းဒကာရယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့ စိတ်ကလေး တော့ နည်းနည်းလေး
ထည့်တွေးပေးကြစေချင်ပါတယ်။ အခုလိုအချိန်ဟာ တရားဝင်ထုတ်ဝေနေကြတဲ့ ဂျာနယ်တွေ၊ ကြော်ငြာတွေမှာတောင်
သင်ဇာဝင့်ကျော် ဝတ်တာထက် ပိုဆိုးတဲ့ ကုန်းပြ ကော့ပြ နေကြတဲ့ မြှူဆွယ်ပုံတွေကို မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ အချိန်မျိုးတွေပါ။
အဲဒီလို ရိုက်နေကြတဲ့ ပုံတွေကို ခင်ဗျားတို့ ခွင့်လွှတ်ပေးထားမယ်ဆိုရင် သင်ဇာဝင့်ကျော် ဝတ်တာလောက်ကတော့
ထည့်ပြောနေစရာတောင် မလိုတဲ့ ကိစ္စမျိုးပါ။ ထားလိုက်ပါဗျာ။ မတော် ကျွန်တော်ကပဲ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို
ကာကွယ်ရေးသားနေသလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားရင် မကောင်းပါဘူး။ အမှန်တော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်အနေနဲ့လည်း
အဲဒီလို မဝတ်သင့်ဘူးဆိုတာလောက်ကိုတော့ လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်။ သို့သော် အခုလို ဟိုက်လိုက်လုပ် ခေါ်ယူဆုံးမပြီး
အဝါကတ်ပြသတိပေးတာမျိုးအထိကျတော့ ဒိုင်လူကြီး မမျှတဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ (အထင်)
နောက် စိတ်ဝင်စားစရာ အမေးအဖြေ လေးတစ်ခုကိုလည်း ဖတ်သင့်တယ် ထင်လို့ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Sunday – တစ်ချိန်ချိန် ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝ ထူထောင်တဲ့အခါ အခုလိုမျိုးကိစ္စတွေက
ဖြေ – မိသားစုက အစမှာ အရမ်းဆူတယ်။ သင်ဇာ့အတွက် ဝမ်းနည်းကြတယ်။ နောက်ပိုင်းသူတို့ နားလည်သွားတယ်။
တခြားသူတွေလည်း ဒီထက်ဆိုးတာဝတ်နေတော့ နောက်မဝတ်ဖို့ဘဲ နားလည်အောင်ပြောတယ်။ စိတ်ညစ်အောင်
ပြောတဲ့စကား မရှိကြတော့ဘူး။ တစ်ချိန်မှာ မိသားစုဘဝတည်ထောင်တဲ့အခါ ဒီကိစ္စက တကယ့်သေးသေးလေးပါ။
ငါ့မှာ ဒီလိုမျိုးကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာ ကို နားလည်လက်ခံပေးနိုင်မလား မေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပြီး လက်တွဲမှာ။
ဒီကိစ္စလေးက သေးသေးလေးပါ။ ဟုတ်ပါတယ် တကယ့်ကို သေးသေးလေးပါ။
ဒါပေမယ့် မှန်ဘီလူးနဲ့ ပုံကြီးချဲ့ကြည့်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကြီးတဲ့အမှုကို ငယ်စေ၊ ငယ်တဲ့အမှုကိုပပျောက်စေဆိုတဲ့
စကား ဘယ်သွားထားမလဲဗျာ။ သတင်းတွေ သတင်းတွေ။ သတင်းတွေ နောက်က မာယာတွေကို မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကတော့
ခင်ဗျားမှာ အားကောင်းတဲ့ မှန်ဘီလူးတစ်လက်လောက်တော့ လိုလိမ့်မယ် ထင်တာပဲ ကျောင်းဒကာရေ..။
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို ဆုံးမတဲ့ ဥက္ကဌကြီး ဦးဇင်ဝိုင်း (နံနက်ခင်း)
သင်္ကြန်တွင်း ရေကစားနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပုံတွေကို ကာဗာတင်ပြီး မီးပွိုင့်တွေမှာ တစ်ချပ် ၅၀ဝ နဲ့ လိုက်ရောင်းနေတဲ့အထိ
အောင်မြင်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌကြီး ဦးဇင်ဝိုင်းက ဖုန်းဆက်ပါတယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် ပြင်ဦးလွင်မှာ ကားရိုက်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က တစ်လလောက်ကြာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့
ဖုန်းနဲ့ပဲ ဆုံးမစကားပြောပါတယ်တဲ့။ တော်တော် ဩဇာညောင်းတဲ့ ဥက္ကဌကြီး။
သမီးကလည်း ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့ ဆုံးမစကားကို နားထောင်ဖို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
လို့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က ပြောပါတယ်တဲ့။
သင်္ကြန်တွင်းမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ တက်တူးဆိုတဲ့ကားအကြောင်းလေး ကို သင်ဇာဝင့်ကျော်ပြောထားတာလေး ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။
အဲဒီကားမှာ သင်ဇာ့ကာရိုက်တာက ထူးခြားတယ်။ မကောင်းတဲ့မိန်းမ၊ အပျက်မဆိုပါတော့။
အရင်တုန်းကလုပ်ရတဲ့ပုံစံထက်တော့ အများကြီးပိုလုပ်ရတာပေါ့။ ဆင်ဆာတွေလည်း ရလာပြီဆိုတော့လေ။
အဝတ်အစားနဲ့လည်း ပြလို့ ရသွားပြီ။
အပျက်မ ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာ ပေါ်ဖို့ ဘယ်လိုအဝတ်အစားတွေနဲ့ သရုပ်ဖေါ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကို
ဂျပန်က ဂီဂီ့ကိုလည်း သတင်းပေးထားရဦးမယ်။ သူက သင်ဇာဝင့်ကျော် ပရိသတ်တဲ့ဗျာ။
သင်ဇာဝင့်ကျော် အပျက်မ လုပ်တဲ့ တက်တူး ဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့၊
ဝါသနာတူကြတဲ့ နိုဇိုးမိကြီးတို့ အဖွဲ့ကိုလည်း သတင်းပေးထားရမယ်။ ကားထွက်လာရင် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြဖို့။
မှတ်မိတယ်နော် … တက်တူး။
မိုက်လား မိုက်လား မိုက်လား ဆိုတဲ့ အသံက သင်ဇာဝင့်ကျော် အသံပါတဲ့။
အသံနဲ့တင် ဆက်စီက ဖြစ်နေပြီးသားဗျ။ အာဟိ…။
အမေမို့ ရဲ့ မပြီးသေးသော ဒိုင်ယာလော့ခ် များ (Sunday)
မို့မို့မြင့်အောင် နဲ့ ကြော်ငြာ၊ ကြော်ငြာနဲ့ မို့မို့မြင့်အောင် သိတ်တော့ ဓါတ်မတည့်ဘူးလားလို့။
မြဝတီတို့ MRTV တို့မှာ ကြော်ငြာတွေ စခေတ်စားတော့ မင်းသမီးတွေအကုန်လုံး ကြော်ငြာတွေရိုက်ကုန်ကြတာပေါ့ ကျောင်းဒကာရယ်… ။
ခိုင်သင်းကြည်တို့ နန္ဒာလှိုင်တို့ ထက်ထက်မိုးဦးတို့ရဲ့ ကြော်ငြာတွေ ခေတ်ကောင်းခဲ့ချိန်ပေါ့။ မေသန်းနုကြီးတောင် သန်တုန်းမြန်တုန်း ဖလန်းဖလန်းထတုန်း ကြော်ငြာတွေလက်မလည်အောင် ရိုက်နေရတုန်း အချိန်ကြီးမှာပေါ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မို့မို့မြင့်အောင်ကတော့ ကြော်ငြာကို လုံးဝလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။
ကြော်ငြာတွေ ခေတ်စားလို့ တော်တော်ကြီးကြာတော့မှ မို့မို့မြင့်အောင်ကြီးက ကြော်ငြာရိုက်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ပါလေရောဗျာ။
ကြော်ငြာရိုက်တာတောင် ယုဇန ဂါးဒင်း ဟော်တယ်ကို စာနယ်ဇင်းတွေ မီဒီယာတွေခေါ်ပြီး
ဆိုပြီး မထေ့တထေ့ပြုံးပြီး ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီး စတိုင်နဲ့ ကြေညာတယ်တဲ့ဗျာ။
မို့မို့မြင့်အောင် ကြော်ငြာရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ သတင်းထူးကြီးပေါ့။
အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် မို့မို့ ကြီးရဲ့ ပထမဆုံးကြော်ငြာက ပါဝါ ရွှေဆိုင်ကြော်ငြာလို့ မှတ်မိနေပါတယ်။ မှားနေရင် ပြင်ပေးကြပါဦး နော့…။
ထားပါတော့…။ အဲဒီအထိ သိတ်မထူးဆန်းသေးပါဘူး။ ထူးဆန်းတာက ဒီလိုဗျ။
ဆိုတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ် ခင်ဗျ။
အဲဒီအချိန်က မေသန်းနုတို့ ထက်ထက်တို့ ခိုင်သင်းကြည်တို့ကလည်း ဇီးထုတ်ကြော်ငြာလေးတွေနဲ့
လူကြိုက်များထင်ရှား နေချိန်ဆိုတော့ ဇီးထုတ်ကြော်ငြာတော့ မရိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အမေမို့ရဲ့စကားက
အဲဒီ ဒိုင်ယာလော့ခ် ကြောင့် ပရိသတ်က အထင်တော်တွေလွဲကုန်ကြတဲ့ဒဏ်ကို မို့မို့ကြီး ခါးစည်းခံခဲ့ရသေးတာပါ။
အခုတော့ အဲဒီ လောင်းရိပ်အောက်က လွတ်လာခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပေါ့။
အေးလေ အချိန်တွေကလည်း ကြာ…ကြာလှပေါ့။ ဆိုတော့…။
မို့မို့မြင့်အောင် အနေနဲ့ဆက်လက်ရိုက်ကူးသွားဦးမယ့် ကြော်ငြာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒိုင်ယာလော့ခ်လေး ဖတ်ကြည့်ဗျာ။
ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးမယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာအဆင့်အတန်းအရ
ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးမှ လက်ခံမှာပါ။ ကြော်ငြာဆိုတာကလည်း သုံးလေးစက္ကန့်နဲ့ ပရိသတ်ရဲ့အာရုံကို
ဆွဲဆောင်ရတဲ့ အနုပညာဖြစ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်နှစ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားမှာ
ဒါကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်ပါ။
ဖတ်ပြီး သောက်မြင်တွေ ကတ်မနေနဲ့ဦး ကျောင်းဒကာရေ…။
အပျိုကြီး ဒါပေမယ့် တင်မိုးလွင် (Sunday)
သူမကို မော်ဒယ်မိခင်ကြီးလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
လတ်ဆတ်လန်းဆန်းနုပျိုစဉ်က သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေး တက္ကသိုလ်ကကျင်းပတဲ့ ပြုံးအလှပိုင်ရှင် ဆုကို
ဆွတ်ခူးခဲ့သေးတယ်လို့ မှတ်မိပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီတက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရတာလို့ ထင်ပါတယ်။
Talents and Model သင်တန်းကနေ သူမမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် မလေးတွေနဲ့ အပြိုင် လှရက်နိုင်လွန်းသူကြီးပါ။
အိမ်ထောင်မပြုသေးဘူးဆိုတော့ အပျိုကြီး ပေါ့ ခင်ဗျာ…။ နည်းနည်း တင်စားရရင်တော့ စီနီယာအကျဆုံး အပျိုကြီး ခင်ဗျ။ ဟေးဟေး ။
သူမကိုလည်း သီးချိန်တန်းမသီး ပွင့်ချိန်တန် မပွင့် စာရင်းထဲ တို့ထားရဦးမှာပါ…။
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တင်မိုးလွင်ကြီးရဲ့ အပြောက ဒီလိုတဲ့ဗျ…။
အခုနှစ်ထဲမှာလည်း အိမ်ထောင်ရေးကို စဉ်းစားဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ Talents and Model သင်တန်းအတွက်
လုပ်ချင်တဲ့အစီအစဉ်တွေ အများကြီးရှိသေးတာက တစ်ကြောင်း၊ တခြားအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကလည်း လုပ်ဖို့ ရှိနေသေးတာကြောင့်
အချစ်ရေးကိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူ စဉ်းစားသွားမှာပါ။
ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုပြီး အတိအကျတော့ မသတ်မှတ်ထားသေးဘူး
အော် အခုထိကို မစဉ်းစားရသေးတဲ့ သဘောပြောသွားတာဗျ…။
ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ကြိုးစားရင်လည်း မီသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။
အင်း ခေတ်က ကိုင်ဇာ ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့
မိုးကို ချစ်လိုက်တာလေ မိမိုးကိုချစ်လိုက်တာလေ ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့တော့ လူပျိုလှည့်လို့ မရနိုင်ဘူးဗျ။
ကျားပေါက် သီချင်းလေးက မမိုးအတွက်များရေးထားလေသလားမသိ။
မင်္ဂလာဆောင်ကို ရွှေ့လိုက်တော့ နင်အဘွားကြီးဖြစ်မယ့်အချိန်ကို စောင့် လိုက်ပါတော့…
အင်း အဘွားကြီးဖြစ်မယ့်အချိန်ဆိုတော့ သိတ်တော့ မစောင့်ရတော့ပါဘူး..။
၂၁ ရာစု အိချောပို (8 Days)
ဂျာနယ်တွေထဲမှာတော့ 8 Days ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးလေးတွေက ထူးခြားပါတယ် ကျောင်းဒကာ။
ဖူးသစ်နုရွ ဖလန်းဖလန်းထနေတဲ့ ကလေးမလေးတွေရဲ့ အလှကို ဓါတ်ပုံဆရာရဲ့အားနဲ့ စင်တင်ဖေါ်ထုတ်ပေးနေတယ် လို့
တောင် တင်စားလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ် 8 Days ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးရှင်လေးကတော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိချောပို လေးဖြစ်ပါတယ်။
ဟေးဟေး။ အိချောပိုလေးရဲ့ အလှကို တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး ခံစားချင်တဲ့ ရွာသားတွေအနေနဲ့ 8 Days ဂျာနယ်ကို အပြေးသာ
မရိုင်းဘူးနော် ကိုကို။ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လန်းနေတာပါ။
ဓါတ်ပုံဆရာကလည်း အေးဇော်မိုးပဲလေ။ တခြားသူမှမဟုတ်တာ…။
အဲဒီအိချောပိုလေးနဲ့ အင်တာဗျူးလေးထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ မေးဖြေလေးတစ်ခုလောက်တော့ ဆွဲထုတ်ပြချင်ပါသေးတယ်။
မေး – ဘဝကို ကိုယ်ကသာ အရာရာစီမံပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစီမံချင်လဲ
ဖြေ – တကယ်သာ စီမံရမယ်ဆိုရင် ကားတွေကို မိုးပေါ်ပျံစေချင်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အချိန်တွေနောက်ကျတာလည်း သိပ်မရှိတော့ဘူးလေ။ အလုပ်တွေလည်း မြန်မြန်ပြီးမယ်ထင်တယ်။
ကိုသန်းနိုင်ကြီးရဲ့ ၂၁ ရာစု လူသား သီချင်းကို သွားသတိရမိတယ်။
အိချောပိုလေးကတော့ ကားတွေကို မိုးပေါ်ပျံဖို့ စီမံချင်ပါသတဲ့။
ကဲ အိချောပိုလေးကို ကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သာမာန်ကားလေးစီးနိုင်တယ်
ဆိုတာလောက်နဲ့တော့ မရဘူးနော် ကျောင်းဒကာ။ ကားပျံတဲ့ ဗျာ။ ကားပျံလိုချင်တာတဲ့။
အချိန်တွေ နောက်ကျတာတွေ မရှိစေချင်လို့တဲ့။
အဲ..အဲ..။ ကားပျံဆိုတော့ ယဉ်ထိန်းရဲပျံတွေလည်း လိုမှာနော် ကိုကို။
မတော် မိုးပျံယဉ်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်ကုန်ရင် ဒုက္ခ။
အိချောပိုလေး မရရင်လည်း နေပါစေဗျာ။
ကားပျံတွေနဲ့ တော့ နေရာမကျလှပါဘူး။ လစ်ပြီဗျို့…။
ရွှေစင် လိုချင်တဲ့ လက်စွပ် ( HELLO )
မေသန်းနုက စကားပြောရင် သူ့ကို သူ မတ်စေ့တဲ့။ မဆင့် လို့ပြောတာ ဘိတ်သံဝဲသွားလို့ မတ်စေ့ ဖြစ်သွားတာပါ။
နန္ဒာလှိုင်က သူ့ကိုယ်သူ နာကလေ နာကလေတဲ့။ နန္ဒာကလေ နန္ဒာကလေ ကို အမြန်ပြောရင်း နာကလေ ဖြစ်သွားတာပါ။
ထွန်းအိန္ဒြာဗို က သူ့ကိုယ်သူ မခိုင်ကြီးတဲ့။
စိုးမြတ်နန္ဒာက သူ့ကိုယ်သူ ဒါဒါ တဲ့။
အခု တစ်လော ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသမီးလေလား ထင်မှတ်မှားရပါတဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင်ရွှေစင်ကတော့
သူ့ကိုယ်သူ စင်ကလေ စင်ကလေ လို့ ပြောပါတယ်ဗျာ။
တော်ကြာ စင်ကလေ စင်ကလေ ဆိုတာနဲ့ တိရိစာ္ဆန်ရုံက ဆင်ကြီးသွားမြင်နေမှာ စိုးလို့ပါဗျာ။
အဲဒီ စင်လေးကလည်း အိပ်မက်တွေ လိုချင်တပ်မက်မှုတွေ ရှိပါတယ်တဲ့ဗျာ။
လှကလည်းလှ တောင့်ကလည်းတောင့်ဆိုတော့ ရွှေစင်လေးကိုသာ ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ကားထဲထည့်ရိုက်ပြီး
ကမ်းခြေကနေ ဘီကီနီ လေးနဲ့ တစ်လှမ်းချင်းတက်လာတဲ့အခန်းများ ရိုက်လိုက်လို့ကတော့ ဟေလီဘယ်ရီ လောက်တော့ သနားသေး ဟေးဟေး။
ဘယ်… သင်ဇာဝင့်ကျော်တို့ ဝတ်တာစားတာ ဟော့တယ်ဆိုတာ အလကားပါ။ အနေအထိုင်မတတ်လို့ ဟော့ရှော့ကြီး ဖြစ်သွားတဲ့ သဘောပါ။
ဘီကီနီ ဝတ်ရဲပါ့မလား ဆိုတာတွေဘာတွေ ခင်ဗျားစိုးရိမ်နေဖို့ မလိုပါဘူးဗျာ။ ဒီဂျာနယ်ထဲပါတဲ့ပုံလေးလောက်ဆိုရင်တောင်
ဘီကီနီ စစ်စစ်ကြီး ဝတ်ပြနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်အသွယ်သွယ်က အစ်ကိုကာလသားတွေ အကြိုက်ပေကိုး ကျောင်းဒကာရဲ့။
အင်း… ရာသီဥတုကလည်းပူပေတာကိုးဗျ.. နော။
ပြောရင်းတောင် ရေဆာလာတယ် ယူနန်က ဘီယာလေးတစ်ခွက်လောက် တိုက်စမ်းကွယ် အမတ်မင်းရယ်။
ကွယ် နာမည်လေးတော့ နည်းနည်း ပြောင်းဖို့လိုမလားပဲ။
ကက်သရင်း ရွှေစင်တို့ တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့။
အဲဒီ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသမီးလေလား ထင်မှတ်မှားရတဲ့ ရွှေစင်လေး ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်လေးအကြောင်း
ပြောပြချင်ပါ တယ်ဗျာ။ ကဲ ဝယ်ပေးနိုင်ရင် ဝယ်ပေးဖို့ ဖတ်ကြည့်ဗျာ…။
စင့်ကိုလေ စင်ချစ်တဲ့သူက လက်စွပ်လေး အရမ်းပေးစေချင်တာ။
ဆွဲကြိုးတွေ နားကပ်တွေ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးပါစေ စင် မလိုချင်ဘူး။
လက်စွပ်လေးပဲ။ အဲဒီလက်စွပ်လေးက သေးသေးလေးနဲ့ ပါးပါးလေးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ပေါ့နော်။
ချစ်သူပေးတဲ့ လက်စွပ်ကို စင့်ရဲ့ လက်သူကြွယ်မှာ အရမ်းဝတ်ချင်တာပဲ။
အဲဒါကတော့ အမှတ်တရအနေနဲ့ တမ်းတခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်ဆိုတော့ လိုချင်တာပေါ့နော်။
အဲဒီအတွေးက စင် ငယ်ငယ် ကတည်းက ရည်းဇားထားရမယ့် အရွယ်မဟုတ် ခင်ကတည်းက ကလေးအိပ်မက်ပေါ့နော်။ ခုချိန်ထိပဲ။
ကဲ စင် ရေ။
စင့်ချစ်သူ ဘယ်သူဆိုတာ ကျွန်တော် လည်းမသိပါဘူးကွယ်။
စင်ပြောပုံဆိုပုံ ကြည့်ရတာ ခုထိ စင့်လူကြီးက စင့်ကို စင်ကြိုက်တဲ့ လက်စွပ် ဝယ်ပေးသေးတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။
(စင် ထဲကကို မထွက်တော့ဘူး။ ပြောရတာ လျှာတောင် ခလုတ်တိုက်တယ်။)
ဂျာနယ်ပေါ် တက်ပြောနေရတယ်ဆိုတာကိုက မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေထဲမှာတော့ စင်လိုချင်နေတဲ့ လက်စွပ်မျိုးဝယ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
ဦးလင်းဝေတဲ့။ သိတ်ချမ်းသာတဲ့ ဘိဇနက်မန်းကြီးပေါ့။
အခု နောက်ပိုင်း အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းကြီးတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လုပ်နေရတဲ့ သူဌေးကြီးပေါ့ကွယ်..။
သူကတော့ စင့်ကို စင်လိုချင်တဲ့ လက်စွပ်လေး ဝယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စင့်အတွက်ဆိုရင် ယူပြီးသားမိန်းမကိုတောင် လျော်ကြေးပေးပြီး ကွာရှင်းလိုက်ဖို့ ဝန်မလေးဘူးတဲ့ဗျာ။
ဦးလင်းဝေပေးတဲ့လက်စွပ်လေးကို စင့် လက်သူကြွယ်လေးမှာ စွပ်ပြီး စင်နဲ့ ဦးလင်းဝေကြီးတို့
အော် ကိုးရီးယားကားတွေက အိမ်ထောင်ရှင်တွေ ရည်းဇားထားတာကို ထမင်းစားရေသောက်ရိုက်ပြနေကြတာ ခဏခဏတွေ့နေမိလို့ပါ။
ဦးလင်းဝေကြီးပေးတဲ့ ဆင်မြီးကွင်းလက်စွပ်လေးကို လက်သူကြွယ်မှာ စွပ်ပြီး ပျော်နေတဲ့ပုံကို ဂျာနယ်ထဲ ထည့်ဦးနော့…။
ကြားသားမိုးကြိုး ဂီတအစည်းအရုံးကြီးကို သူတည်ထောင်သတဲ့ (မန္တလေး အာရုဏ်ဦး)
မြို့မမောင်မောင် ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။
ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ ဂီတအစည်းအရုံးရဲ့ ရာဇဝင်ကို ပြန်တူးဆွပေးထားတာဖြစ်ပြီး
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး အကော်ဒီယံ ဦးအုန်းကျော် ရဲ့ စကားတစ်ချို့ကို
ခြေပထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဘိုးကြီးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ (၃၀-၁၂-၂၀၁၁) နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမနားက City Star ဟော်တယ်မှာ
အကော်ဒီယံ အုန်းကျော်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီးက မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အကော်ဒီယံအုန်းကျော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံးကြီးကို အမှုဆောင်သက်တမ်း ၃ ဆက်၊
နှစ်ပေါင်း ၁ရ နှစ်ကျော်ကျော် ဥက္ကဌလုပ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ခင်ဗျာ။
အဲဒီကာလတွေအတွင်း စာသားတွေသာပြောင်းသွားပေမယ့် သံစဉ်တွေက တစ်မျိုးတည်းလိုပဲ ထပ်နေတတ်တဲ့
အကျိုးပြုပေါ်လစီသီချင်းပေါင်းမြောက်များစွာကို တစ်ယောက်တည်း ဒိုင်ခံရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထားလိုက်ပါဗျာ သူ့သမိုင်းသူရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဆောင်းပါး ဘက် ပြန်လှည့်ရအောင်ပါ။
အဖွဲ့ဝင်မရှိ၊ ငွေကြေးတစ်ပြားမှမရှိ၊ အစည်းအရုံးနေရာမရှိတဲ့ အဖွဲ့ကြီးကို တည်ထောင်ပြီး
ဂီတအစည်းအရုံးကြီး ရဲ့ တည်နေရာ အဆောက်အဦးဖြစ်တဲ့ မြနန္ဒာအဆောက်အဦကြီးလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ပြီးတော့ အသင်းဝင် ဂီတသမားများကိုလည်း မြေကွက်များရအောင် လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ တယ်လီဖုန်းများလည်း
ရယူပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ နိုင်ငံတော် ပွဲကြီးများဖြစ်တဲ့ လှေသဘင်ပွဲ၊ အမျိုးသားအားကစားပွဲတော်၊ မြင်းခင်းသဘင်နှင့်
အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတော်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ အစည်းအရုံးအနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဂီတသမားများရဲ့ မူပိုင်ခွင့်နှင့်
နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွားလာခွင့်ရအောင် ကူညီပေးပါတယ် တဲ့။
အဲဒီလို တွေ ကိုယ်ရေသွေးပြီး ပြောသွားတဲ့ သူ့စကားတွေကို ဘယ်ဂီတသမားကမှ လက်မခံနိုင်ကြပါဘူးတဲ့။
စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ လက်ရှိ ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်လတ် ဦးဆောင်တဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးကြီးနှင့် ဦးအုန်းကျော်တို့ဟာ ဂီတအစည်းအရုံးအဆောက်အဦးခန်းမမှာ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပြုလုပ်ရင်း ဦးအုန်းကျော်မိသားစုဝင်တွေ နေထိုင်ပြီး ဖယ်ရှားမပေးတဲ့အကြောင်းနှင့်
အခန်းငှားခ မပြေလည်တဲ့အတွက် တရားစွဲဆို အမှုရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက စတဲ့ ကိစ္စတွေပါတဲ့။
ဒီဆောင်းပါးရှင်ကတော့ တရားစွဲတာတွေ မိသားစုဝင်တွေ ဂီတအစည်းအရုံးအဆောက်အဦးခန်းမက ဖယ်မပေးတာတွေကို
ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဦးအုန်းကျော်ကြီး လိုရာဆွဲပြောသွားတဲ့ ကိုယ်ရေသွေးစကားတွေကို ပြည်သူတွေ အမှန်အတိုင်း
သိစေချင်တာပါတဲ့။ ကဲ မူရင်း အရေးအသားလေး နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
မြေနေရာချထားတာလည်း ဂီတအစည်းအရုံးတစ်ဖွဲ့တည်းကို ချပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒ စေတနာတွေ ကြောင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ စာပေ၊ သဘင်အစည်းအရုံး ၊
ပန်းပညာရှင်များအစည်းအရုံး၊ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ ပေးတဲ့
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်းပါ။ ကိုအုန်းကျော်မျက်နှာနဲ့ ဘက်လိုက်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီစကားဟာ အလှူ့လဖက်နဲ့ မျက်နှာလုပ်တာပါ။ အဲဒီမြေကိစ္စမှာ ယောက်စေ့ရတာ
ကိုအုန်းကျော် မိသားစုဝင်တွေနဲ့ တပည့်နောက်လိုက်တွေဟာ အခွင့်ထူးခံတွေပါပဲ။ တယ်လီဖုန်းလည်း အတူတူပါ။
နိုင်ငံတော်ပွဲတွေမှာလည်း စရိတ်စကနှင့် အထူးအခွင့်အရေးတွေကို ဘယ်အစည်းအရုံးဝင်မှ မရပါဘူး။
ကိုအုန်းကျော် (ဥက္ကဌ) နှင့် တစ်နယ်ထဲသားတေးရေးသူတစ်ယောက်ဟာ ဘိုးဘွားအမွေကို ခံစားသလို
ခံစားကြတာ အများအသိပါ။ ကိုအုန်းကျော်တို့ တစ်ဖွဲ့လုံး တာဝန်လွှဲတော့မှပဲ နိုင်ငံတော် အကျိုးပြုသီချင်းတွေမှာ
အခြားပညာရှင်တွေရဲ့ တေးသီချင်းတွေကို ကြားရတာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တဲ့ ပြည်သူပရိသတ်တွေ သိမှာပါ။
မူပိုင်ခွင့်တို့၊ ခရီးသွားခွင့်တို့ ဆိုတာကို ထောက်ခံပေးရတာလည်း ရုံးရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမို့ ကြွားစရာ
တစ်ကွက်မှ ပါမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုအုန်းကျော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အကြွားရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
အမှန်တရားမှာ ခြားမရှိဘဲ အသားယူပြောလျှင် အမှန်တရားအတွက် တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကို သိစေချင်တာမို့။
အကော်ဒီယံအုန်းကျော် နှင့် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးဇာတ်လမ်းကို ရေးတေးတေးတော့
သဘောပေါက် လောက်ရော ပေါ့။
အော် အင်နားရှား အင်နားရှား…။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အဲဒီ အင်နားရှားကြီး သွားသတိရလို့ပါ။
ကဲ ဒီတစ်ပတ်တော့ အချိန်တော်တော် နည်းနေတဲ့ကြားက ဓါတ်ပုံတင်ကြည့်တာ နည်းနည်းခက်နေတာနဲ့
နာနာ့ဂို နာနှိုက်နယ်…… :cool:
…. နန္ဒာ့ကို ငါကြိုက်တယ်…
ချိုပေါ့ကျ ၁၂ တက်လာပြီ ဆိုတော့ မဒမ်ချော စောင့်ကြည့်မှုနဲနဲလျော့လာပြီ၊ယုံကြည်မှုပြန်ရလာပြီလို့ သုံးသပ်ရမှာပဲ နောက်တစ်ခါ ထပ်မမိုက်ပါနဲ့တော့ ဗျာ ၊ အမကြီးကလဲ ကိုယ့်ယောင်္ကျားကို ဒီ လို ဘယ်ကြပ်ချင်ပါ့ မလဲ ( ဟုတ် တယ် မလား အမကြီး ရာ ၊ ဟုတ်တာပေါ့ ငါ့မောင် ရာ…….)
အကုန်လုံးကို ကြိုက်မိတဲ့ အတွက် အကုန်ကြိုက်ကြောင်းသာ ရိုးသားစွာ ပြောပါရစေခင်ဗျာ
တစ်ခု တော့ ရှိတယ် တခြား သတင်းတွေ မှား တာ ဘာမှ မပြောလိုပေမဲ့ မမိုး ကြီး သတင်း မှား ဖော်ပြတာတော့ အားကြီး စိတ်ဆိုးတယ် ဗျာ ( သူ ဘာ ကြောင့် အပျိုကြီး ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတာ အခုပြောပြလိုက်ရင် အကုန် ပွက်လောရိုက်ကုန်မှာ စိုးလို့ ကိုချောနဲ့ လူချင်းတွေ့မှ ပြောတော့မယ် )
နောက်တစ်ခါများ မမိုး နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဘယ်ကျောင်းမှာ တက်ခဲ့တယ် ဘယ်ဆိုဒ်ဝတ်တယ် အဲ ဘယ်ဆိုဒ် တွေ အင်တာနက်မှာ ကြည့်တတ်တယ် ဆိုတာတွေ မှားများ ပြောခဲ့ရင် ဟို ဝန်ကြီးလို ရွာထဲမှာ တောင်းပန်ခိုင်းရမယ် ဟင်း ဟင်း
ကိုဖြူလှတို့ကတော့ ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့ လူလို့ မပြောရဘူး ။ လူ တွေစိတ်မှာ ဘာတွေ ရှိတယ် ဘာတွေ တွေးတယ် သိနေတော့ ကြာလာရင် ညည်းငွေ့လာမှာ စိုးတာနဲ့ ဘာသံမှ မထွက်လာခင် အသစ်လေးတွေ ပြောင်းဘို့ ကြိုးစားနေပြီ ၊ ရွာထဲမှာ ပို့စ် အသစ်ပုံစံ တင်တာ ဘာမှ မပြောလိုပေမဲ့ အိမ်မှာတော့….. စိတ်ထိန်းနော စိတ်ထိန်း
မှားတဲ့ဘက်မှာကနေ စဆွဲရအောင် ဘဘဘလက်ရေ …
အဲသည်သီချင်းထဲ က အနှစ်သက်ဆုံး စာသားကတော့
မျက်လုံးက တဖက် ကန်းနေခဲ့ပါ လျက်နဲ့ ..ဘုရင်ကို ဖမ်းပြီး အကျဉ်းချခဲ့သူ
တော်လှန်တဲ့ အတွေး အားနည်းနေလျက်က လူသာမန် မလုပ်နိုင်တာ
လုပ်ပြသွားတာကို တလွဲ ကိုးကွယ်တဲ့ အာသီသ …
အလိုမပြည့်တဲ့ လက်ရှိဘဝ အရွဲ့တိုက်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ
အဲ့ဒါတွေ အကုန် တွေ့ရတယ်ဗျို့ …
ကျန်တာလေးတွေ နောက်မှ ထပ်လာပါ့မယ်ဗျာ …
လူကနေမကောင်းလို့လားမသိ … မျက်စိမှိတ်တိုင်း
စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန် ချည်း မြင်မြင်နေတယ်ဗျာ…
(အော်… သေရင် ကောင်းရာမွန်ရာတော့ ရောက်ဦးမယ်)
ဗီလိန်အကြောင်းကို.ပြောရရင်တော့ အမြဲတမ်း ဗီလိန်ဆိုတာ မရှိသလို ထာဝရမင်းသားဆိုတာလည်း ခပ်ရှားရှားဆိုပဲ..
အဓိကတော့.လူပါပဲခင်ဗျာ..လူကိုခင်ရင် မူကိုပြင်ပြီး မြင်တတ်ကြတာ လူ့သဘာဝဖြစ်သလို..
ကိုယ်နဲ့မတူ ကိုယ့်ရန်သူ ဆိုပြီးတွေးတတ်ကြတာကလည်း သူတို့လူတွေပါပဲလေ..
ပြောရရင် ကိုယ့်စာကိုရေး ကိုယ့်တေးကိုဆို လို့ဆိုထားပေမဲ့လည်း..
နောက်ဆုံးမတော့ ကျောင်းဒကာပြောသလို သမိုင်းကပဲ ဗီလိန် နဲ့ မင်းသားကို ခွဲခြားသွားမှာပါဗျာ..
ဒီတခေါက် ချိုပေါ့ကျကတော့ ကောင်းလွန်းသလို.မန့်လည်းမန့်ချင်ပေမဲ့..
လက်ကလေးထောင်ရင်း. ဝင်သောက်သွားပါတယ် ဗီလိန်ကျောင်းဒကာကြီးရယ်..
ဖွင့်ကြည့်ဖို့လည်း မလွယ်၊ ဖတ်ပြီး မန့်ဖို့လည်း မလွယ်လို့ ဖတ်ရုံသာဖတ်ပြီး မမန့်ဖြစ်ဘူး။ ခုရက်ထဲ ပြန်တက်တက်နေလို့ သူများမန့်တာတွေဖတ်ဖို့ ဖွင့်ကြည့်တော့မှ ဟေမာနေဝင်းသီချင်း ( နှုတ်ဆက်သီချင်း) ဆိုနေမှန်း သိရတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျမလည်း လားရှိုးသိန်းအောင်သီချင်း (နှုတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ်) ပြန်ဆိုချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီရွာထဲမှာ ရှိဦးမှာပါ။ စာတွေရေးနေဦးမှာပါဆိုတော့ ကိုမဲချောကြီး လွတ်စေသတည်း။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ် ကက်ဆက်ခေတ်က ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း
အသံနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဇတ်ထုတ်ကို သိတ်ခရေဇီ
ပြော မပြောချင်ပေါင်ဗျာ…ဂီဂီ့ စကားငှားသုံးရရင်..ချဉ်ပါတယ်အေ..
သင်လေး တင်လေး စင်လေးတို့ ဒဲ့ပုံလေးတွေတင်ပေးရင်
ပိုပြီး ဂွတ်မယ်ဗျာ။ ဗိုလ်အောင်ဒင် စကားတော့ အခိုက်ဆုံးပဲ…
သိပ်ကြောက်သွားသလား… မမြရင်… ဗိုလ်အောင်ဒင် ဘောင်းဘီချွတ်တာ
ရေးချိုးမလို့ပါကွာ…. ငှဲငှဲ.. :cool: :cool: